किन कोरियाली मानिसहरू विवाह गर्न चाहनुहुन्छ विदेशी महिला ।
देखि मध्य, मा एक बहुमत को पोस्टर मा प्रदर्शित सियोल मेट्रो स्टेशन, यो देख्न सकिन्थ्यो कि दक्षिण कोरिया सरकार बनाउने थियो एक प्रयास गर्न प्रोत्साहन स्थानीय बालिका विवाह गर्न किसान । पछि, जवान महिला थियो एक उत्प्रेरणा गर्न कदम देखि शहर गर्न देहात कारण इच्छा को एक राम्रो जीवन । यसैले छन्, केवल जवान मानिसहरू बाँकी मा आफ्नो गृहनगर गर्न पछि हेर्न आफ्नो खेत र राख्न कृषि उद्योग जा. त्यो अभियान ल्याउन विफल बारेमा कुनै राम्रो परिणाम छ । गत वर्ष, अधिक एक भन्दा पाँचौं कोरियन किसान र माझिहरु महिला विवाहित. लागि तत्काल, प्रान्त को लागि प्रसिद्ध छ को उच्चतम नम्बर को क्रस-सीमाना विवाह, कोरिया मा एक चोटी पुग्न बारे वर्ष पहिले. समयमा विवाह गर्दा बीच कोरियन पुरुष र चिनियाँ, दक्षिण एसियाली महिला बाहिर भङ्ग, एक विवाह दलाली गरे केहि दिन । छैन लामो पहिले, धेरै प्रान्त र शहर मा दक्षिण कोरिया निलम्बित एक नारा प्रशंसा भियतनामी ब्राइड्स लागि राम्रो प्राकृतिक सद्गुण: वफादारी, परिवार-उन्मुखीकरण र लगनशीलताको छ । अब, मा सियोल मेट्रो, यो देख्न गाह्रो छैन पोस्टर प्रोत्साहन गर्न बहुसांस्कृतिक परिवार छ । सांख्यिकीय, संख्या को बहुसांस्कृतिक परिवार पार आशा छ. लाख भन्दा मा कुल जनसंख्या को मिलियन दक्षिण कोरिया मा छ । यो एक उल्लेखनीय आंकडा संग एक देश मा एक लामो-उभिरहेका परम्परा राष्ट्रवादी एकता छ । गर्न नेतृत्व छ एक गम्भीर लिङ्ग असंतुलन मा दक्षिण कोरिया । मा, आधा, मध्य-वृद्ध मानिस एक्लै बाँच्न दक्षिण कोरिया मा, र यो संख्या बढेको छ -गुना देखि.
छोराछोरीलाई महिला मा प्रसव उमेर, तुलना गर्न छोराछोरीलाई मा. यो एक छ सबै भन्दा कम जन्म दर । बिना अध्यागमन, श्रम शक्ति कमी हुनेछ धेरै कोरिया । कोरियाली सरकारले अत्यन्तै उत्साहित विकास मा एक बहु-जातीय देश छ । लागि बजेट बहुसांस्कृतिक परिवार द्वारा बढेको छ भएकोले, माथि अर्ब वोन (लाख). लगभग समर्थन केन्द्र प्रदान अनुवाद सेवा, भाषा शिक्षण, बाल हेरविचार र परामर्श हो स्थापित बढाउन यो अभियान । विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक अब समावेश वर्गहरु मा बहु-जातीय परिवार । मा, आधा-रक्त छोराछोरी छन् अनुमति सैन्य सामेल. जब काम गर्ने दक्षिण कोरिया मा अवैध उद्धार एक दर्जन कोरियाई को एक आगो मा, स्थानीय बासिन्दा आग्रह गरे प्रदान गर्न सरकार यी निवास र सरकारी अधिकारीहरू सहमत । तर, गिरने संग लाइन मा कोरियाली संस्कृति मा एक बहु-जातीय परिवार अझै पनि गाह्रो छ विदेशीहरू लागि. एक सर्वेक्षण अनुसार कोरिया द्वारा संस्थान, विकास को लागि प्रत्येक विवाह संग, विदेशीहरू छन् विवाह कि अन्त भित्र को पहिलो वर्ष छ । मा, लगभग एक पाँचौ सबै छोराछोरीलाई जन्म देखि क्रस-सीमाना विवाह छैनन् प्रदान.
धेरै आमाहरू थाहा साना कोरियन
विद्यमान विभिन्न प्रकारका भेदभाव छ । कोरियन सरकार कस नियमहरु मा विवाह । गत महिना, यो सरकार घोषणा दुई नयाँ आवश्यकताहरु: विदेशी दुलहीको पर्छ बोल्न कोरियन भाषा र कोरियन दुलहा पर्छ प्रमाणित वित्तीय आय गर्न सरकार । आलोचकहरु भन्छन् कि कस मात्र उमेर बढन प्रक्रिया को राष्ट्रिय कार्यबल छ । श्री ली मा अमेरिकी, एक विवाह दलाल मा डेगू — भने महिलाको संख्या लागि योग्य विवाह कम हुनेछ. अधिकांश विदेशी ब्राइड्स आए गरिब ग्रामीण क्षेत्रमा सक्षम छैनन् उठयो कोरियन भाषा छ । यसैबीच, प्रतियोगिता आउँछ चिनियाँ ब्राइड्स देश एक उच्च नम्बर छ विवाह महिला खोजिरहेका प्रतियोगिता धेरै भीषण छ । वास्तवमा, यो संख्या कोरियाली पुरुष विवाह विदेशी ब्राइड्स गिरने छ देखि, गर्न, पछिल्लो वर्ष छ । तिनीहरूमध्ये, को कुल मा विवाह को शहर । किम येओंग-शिन — भियतनाम — कोरिया सांस्कृतिक केन्द्र मा हनोई भने भियतनामी केटीहरु अब चाहनुहुन्छ गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा को दक्षिण कोरिया । तिनीहरूले हेरिरहेका प्रेम कोरियन फिल्म र -पप संगीत र. कोरियाली ग्राहकहरु लागि, ली चांग-मिनेट, एक दलाल सियोल मा भन्छन् तिनीहरूले झन् राम्रो शिक्षित, पनि अधिक मान्छे हौं समूह को उच्चतम आय मा दक्षिण कोरिया । अरूलाई को छन् (एक अवधि को लागि मात्र एक वर्ग कोरियाली महिला भनिन्छ धन क्षय). तिनीहरूले रुचि जो एक पत्नी लिन सक्छन् मा परम्परागत भूमिका जबकि कोरियन महिलाहरु गर्न इच्छुक छैनन् । दलाल बिलौना, यो राम्रो हुनेछ भने पुरुष शुरू छन् विदेशी पत्नीहरू द्वारा आफ्नो मित्र, छैन दलाल मार्फत छ । त्यहाँ पनि हुन सक्छ एक उपयुक्त समाधान मा एक छिटो परिवर्तन कोरियन समाज आज ।
← पहिलो पाँच ठाउँमा पूरा गर्न एक राम्रो पुरुष
कोरियन एक्लो - पूरा एक्लो महिला कोरिया देखि →